काठमाडौंलाई भीमदत्तको एउटा सेना जीवितै छ भन्दिनू – eratokhabar
काठमाडौंलाई भीमदत्तको एउटा सेना जीवितै छ भन्दिनू
ई-रातो खबर २०७४, ८ असार बिहीबार १३:०९ June 28, 2017 1143 Views
(१९९४ सालमा प्युठानमा जन्मिएका पूर्णबहादुर रोक्का भीमदत्त पन्तद्वारा गठित जनसेनाका एक सिपाही हुन् । भीमदत्तको हत्यापछि गिरफ्तार भएर ७ वर्ष जेलमा बसेर रिहा भएपछि उनी जोगबुढास्थित रङ्गुना खोलाको बगरमा गिट्टी कुटेर जीवनको गुजारा चलाइरहेका छन् । उनकै निवासमा नारायण नेपाल र दिपक भणडारीले लिइएकाे अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश प्रकाशित गरिएको छ)
»»यहाँको जन्म कहिले, कहाँ भएको हो ?
»»भीमदत्त पन्तसँग तपाईंको चिनजान कहाँ भएको हो ?
»»आन्दोलन कसरी सुरु भएको थियो ? केके गर्नुभयो त ?
»»विद्रोहको नेतृत्व कसले गथ्र्याे ? सेना पनि थिए कि ?
»»भीमदत्तका विषयमा राेचक प्रसङ्ग केही छन् ?
»»भीमदत्तको फौजलाई तालिम कसले दिन्थ्यो ? हतियार कहाँबाट आउँथ्यो ?
»» धनगढीको मोर्चामा तपाईंहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको चर्चा छ नी ?
»»भीमदत्त पन्त कसरी मारिए ? केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
»»प्रतिरोध गर्नुभएन ? भीमदत्तले केही भन्न भ्याएनन् ?
»»तपाईं जेल पनि पर्नुभयो कि ? कहिले छुट्नुभयो ?
»»तपाईंलाई सङ्गठित गर्न कोही आउँदैनन् ?
»»भीमदत्तको आज ठूलो महिमा छ । तपाई जिउँदो सहिद भेट्न कोही आउँदैनन् त ?
»»देशमा गणतन्त्र आयो, कसरी बुझ्नुभएको छ ?
»»अन्तिममा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
ताप्लेजुङका नेता गिरफ्तार
दार्जलिङमा भएको दमनको विरोध /१२ गते प्रदर्शन